ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကလေးကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ခေတ်မမီတော့တဲ့ အယူအဆအမှား (6) ခု - Lifestyle Myanmar
Home Family ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကလေးကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ခေတ်မမီတော့တဲ့ အယူအဆအမှား (6) ခု
ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကလေးကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ခေတ်မမီတော့တဲ့ အယူအဆအမှား (6) ခု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်တွေ၊ အဖွားတွေဟာ ဘဝရဲ့မတူညီတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့အကြံပေးချက်တွေကို အမြော်အမြင်ရှိရှိ တကယ်မျှဝေနိုင်တယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုပေါ် မှီခိုအားမကိုးခင်မှာ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောလာလျှင် အကောင်းအဆိုးကို ချိန်ဆဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိခင်တွေ၊ အဖွားတွေဆီက လက်ဆင့်ကမ်း ယုံကြည်နေကြဆဲဖြစ်တဲ့ ကလေးကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ခေတ်မမှီတော့တဲ့ အယူအဆ အမှားလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ အဖျားလျှော့ချဖို့ ကလေးကို အနှီးနဲ့ထုပ်ထားတာ
ရှေးလူကြီးတချို့က ဖျားနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကို အဖျားကျဖို့ အနှီးနဲ့ ကျစ်နေအောင်ထုပ်တတ်ကြပါတယ်။ အရေပြားက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်ကို သူ့ဘာသာသူ ပိုပြီးထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့် ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့ အကြံမပြုပါဘူး။ သင့်ကလေးပေါ်မှာ အဝတ်တွေ သိပ်အများကြီး ဝတ်ပေးထားလျှင် အပူချိန်က ပိုမြင့်လာတာ (သို့)မကျတာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကလေးရဲ့ နဖူးပေါ်မှာ ရေဖတ်အဝတ် အေးအေးလေး တင်ပေးပါ။
သင့်ကလေးကို အရည်များများ တိုက်ပါ။
သင့်ကလေးဟာ သူတို့ရဲ့အရေပြားကတဆင့် အလွယ်တကူ အပူကျနိုင်တာကြောင့် အဝတ်အစား အထပ်ထပ်ဝတ်ပေးထားတာကို ဖယ်ရှားပါ။
၂။ ကလေးနေမကောင်းလျှင် ရေမချိုးပေးတာ
ကလေးတွေ နေမကောင်းနေစဉ် ရေချိုးပေးတာဟာ အအေးပတ်ပြီး ပိုဆိုးစေတယ်လို့ လူတွေက ထင်ကြပါတယ်။ ဖျားနေတဲ့ကလေးကို ရေချိုးပေးလို့ရပါတယ်။ (သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်က 99 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထက် ပိုမမြင့်ဘူးဆိုရင်၊ သူတို့ဟာ အရေပြားရောဂါ ခံစားနေရတာမဟုတ်ရင် ) ကလေးကို ရေချိုးပေးလို့ ရတယ်လို့ ဆရာဝန်များက ဆိုပါတယ်။ မြန်မြန်ချိုးပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ရာသီဥတုကအေးတယ်ဆိုရင် ရေနွေးစပ်ပြီး ချိုးပေးလို့ရပါတယ်။
၃။ ကလေးရဲ့ဆံပင် ပိုထူအောင် ခေါင်းရိတ်ပေးတာ
လသားကလေးငယ်ကို ဆံပင်ပါးပြီး ကျဲနေရင် မိဘတွေက ကလေးဆံပင် ထူပြီးသန်လာအောင် ခေါင်းရိတ်ပေးရမယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဒါကအယူအဆအမှားဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ရိတ်တာက ကလေးဖြစ်ဖြစ်၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ဖြစ် ပိုပြီးထူလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆံပင်မွှေးညှင်းပေါက်လေးတွေဟာ အရေပြားရဲ့ မျက်နှာပြင်အောက်မှာ လက်မအတော်များများ တည်ရှိတာကြောင့် ခေါင်းရိတ်မယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့ဦးရေပြားက ပါးတဲ့အတွက် ထိရှလွယ်တာ၊ ပိုးဝင်လွယ်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆံပင်က ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းက အပူချိန်ကို မဆုံးရှုံးအောင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဆံပင်ရိတ်ပြီး စတင်ပေါက်လာတဲ့အခါ ကြည့်လိုက်ရင် ပိုထူတယ်ထင်ရတာကြောင့် ဆံပင်ရိတ်တာနဲ့ မရိတ်တာအကြား ခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များက ပြောပါတယ်။ သို့သော် ဒါက အမြင်အာရုံ သက်ရောက်မှုတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး ၃-၄လမတိုင်ခင် ဆံပင်မရိတ်ဖို့ ဆရာဝန်များက ဆိုပါတယ်။
၄။ ကလေးကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး အိမ်သာသုံးတတ်ဖို့ သင်ပေးတာ
သင့်ရဲ့ကလေးသေးသေးလေးကို အခုအိမ်သာ မသုံးစေချင်သေးဘူးဆိုရင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက မတူညီကြသလိုပဲ ကလေးတွေအားလုံးက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာ ဖွံ့ဖြိုးကြတာကြောင့် သင့်ကလေးက အဆင်သင့်မဖြစ်သေးရင် သူတို့ကို ဖိအားမပေးပါနဲ့။ တချို့ကလေးတွေက ၁နှစ်မှာ အိမ်သာအိုး potty စသုံးကြပြီး တချို့က ၂နှစ်မှာ စသုံးတာကြောင့် မတူကြပါဘူး။
၅။ အပူလောင်ရင် ထောပတ်နဲ့ ကုသတာ
ဒါက တကယ့်အဖြစ်များတဲ့ အယူအဆမှားတစ်ခုပါ။ ဘာ့ကြောင့် ဒါကို ယုံကြည်ကြတာလဲ?
အပူလောင်တဲ့အခါ ဒဏ်ရာပေါ်ကို ထောပတ်လိမ်းတာက ဒဏ်ရာကို ပိုဆိုးသွားစေပါတယ် ။အရေပြား ဒဏ်ရာကိုကုသဖို့ ထောပတ်လိမ်းတာကို ဆေးဖက်ဆိုင်ရာက ခွင့်မပြုထားပါဘူး။ ထိုသို့ပြုလုပ်လျှင် အရေပြားကို ပျက်စီးစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အပူလောင်တဲ့အရေပြားကို ရေအေးအောက်မှာ ထားပါ (ရေခဲလို အရမ်းအေးလွန်းတာ မဖြစ်ရပါဘူး)
အပူလောင်ဒဏ်ရာအတွက် ointment (ဆီမွှေး)လိမ်းပေးပါ။
ပြီးနောက် ဆရာဝန်ဆီကိုသွားပြဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
၆။ ကလေးက ဘယ်သန်ဆိုရင် ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးတာ
အရင်တုန်းက မိသားစုတွေဟာ သူတို့ကလေးကို ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ စာရေးတာတို့ပြုလုပ်ခဲ့ရင် များသောအားဖြင့် ညာဘက်လက်နဲ့ ရေးတတ်အောင် ပြန်ပြီး သင်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက တကယ်လိုအပ်တာလား?
ကလေးတစ်ယောက်ဟာ လူ့လောကထဲရောက်လာတဲ့အခါ သူတို့မှာ dominant hand ဆိုတာ ရှိပြီးသားပါ။ ကျွန်တော်တို့က သဘာဝကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ negative အကျိုးဆက်တွေကို ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် သင်ယူနိုင်စွမ်းကို လျှော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ သဘာဝ tendency( ယိမ်းယိုင်မှု)နှင့် သွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကြှနျုပျတို့ ယုံကွညျနဆေဲဖွဈတဲ့ ကလေးကနျြးမာရေးနှငျ့ပတျသတျပွီး ခတျေမမီတော့တဲ့ အယူအဆအမှား (6) ခု
ကြှနျတျောတို့ရဲ့မိခငျတှေ၊ အဖှားတှဟော ဘဝရဲ့မတူညီတဲ့နယျပယျအသီးသီးနဲ့ ပတျသတျပွီး အသုံးဝငျတဲ့အကွံပေးခကျြတှကေို အမွျောအမွငျရှိရှိ တကယျမြှဝနေိုငျတယျဆိုတာ သခြောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ ကြှမျးကငျြမှုပျေါ မှီခိုအားမကိုးခငျမှာ အထူးသဖွငျ့ ကလေးတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး ပွောလာလြှငျ အကောငျးအဆိုးကို ခြိနျဆဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မိခငျတှေ၊ အဖှားတှဆေီက လကျဆငျ့ကမျး ယုံကွညျနကွေဆဲဖွဈတဲ့ ကလေးကနျြးမာရေးနှငျ့ ပတျသတျပွီး ခတျေမမှီတော့တဲ့ အယူအဆ အမှားလေးတှကေို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
၁။ အဖြားလြှော့ခဖြို့ ကလေးကို အနှီးနဲ့ထုပျထားတာ
ရှေးလူကွီးတခြို့က ဖြားနတေဲ့ကလေးတဈယောကျကို အဖြားကဖြို့ အနှီးနဲ့ ကဈြနအေောငျထုပျတတျကွပါတယျ။ အရပွေားက ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အပူခြိနျကို သူ့ဘာသာသူ ပိုပွီးထိရောကျစှာ ထိနျးခြုပျထားတာကွောငျ့ ဒီလိုပွုလုပျဖို့ အကွံမပွုပါဘူး။ သငျ့ကလေးပျေါမှာ အဝတျတှေ သိပျအမြားကွီး ဝတျပေးထားလြှငျ အပူခြိနျက ပိုမွငျ့လာတာ (သို့)မကတြာ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
ကလေးရဲ့ နဖူးပျေါမှာ ရဖေတျအဝတျ အေးအေးလေး တငျပေးပါ။
သငျ့ကလေးဟာ သူတို့ရဲ့အရပွေားကတဆငျ့ အလှယျတကူ အပူကနြိုငျတာကွောငျ့ အဝတျအစား အထပျထပျဝတျပေးထားတာကို ဖယျရှားပါ။
၂။ ကလေးနမေကောငျးလြှငျ ရမေခြိုးပေးတာ
ကလေးတှေ နမေကောငျးနစေဉျ ရခြေိုးပေးတာဟာ အအေးပတျပွီး ပိုဆိုးစတေယျလို့ လူတှကေ ထငျကွပါတယျ။ ဖြားနတေဲ့ကလေးကို ရခြေိုးပေးလို့ရပါတယျ။ (သူတို့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျအပူခြိနျက 99 ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျထကျ ပိုမမွငျ့ဘူးဆိုရငျ၊ သူတို့ဟာ အရပွေားရောဂါ ခံစားနရေတာမဟုတျရငျ ) ကလေးကို ရခြေိုးပေးလို့ ရတယျလို့ ဆရာဝနျမြားက ဆိုပါတယျ။ မွနျမွနျခြိုးပေးဖို့တော့ လိုပါတယျ။ ရာသီဥတုကအေးတယျဆိုရငျ ရနှေေးစပျပွီး ခြိုးပေးလို့ရပါတယျ။
၃။ ကလေးရဲ့ဆံပငျ ပိုထူအောငျ ခေါငျးရိတျပေးတာ
လသားကလေးငယျကို ဆံပငျပါးပွီး ကြဲနရေငျ မိဘတှကေ ကလေးဆံပငျ ထူပွီးသနျလာအောငျ ခေါငျးရိတျပေးရမယျလို့ ယုံကွညျကွပါတယျ။
ဒါကအယူအဆအမှားဖွဈပါတယျ။ ဆံပငျရိတျတာက ကလေးဖွဈဖွဈ၊ အရှယျရောကျပွီးသူဖွဈဖွဈ ပိုပွီးထူလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဆံပငျမှေးညှငျးပေါကျလေးတှဟော အရပွေားရဲ့ မကျြနှာပွငျအောကျမှာ လကျမအတျောမြားမြား တညျရှိတာကွောငျ့ ခေါငျးရိတျမယျဆိုရငျ ကလေးရဲ့ဦးရပွေားက ပါးတဲ့အတှကျ ထိရှလှယျတာ၊ ပိုးဝငျလှယျတာ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဆံပငျက ကလေးရဲ့ခန်ဓာကိုယျအတှငျးပိုငျးက အပူခြိနျကို မဆုံးရှုံးအောငျ ထိနျးသိမျးကာကှယျပေးပါတယျ။ ဆံပငျရိတျပွီး စတငျပေါကျလာတဲ့အခါ ကွညျ့လိုကျရငျ ပိုထူတယျထငျရတာကွောငျ့ ဆံပငျရိတျတာနဲ့ မရိတျတာအကွား ခွားနားမှုကွောငျ့ဖွဈတယျလို့ အရပွေားအထူးကုဆရာဝနျမြားက ပွောပါတယျ။ သို့သျော ဒါက အမွငျအာရုံ သကျရောကျမှုတဈခုသာ ဖွဈပါတယျ။ ကလေး ၃-၄လမတိုငျခငျ ဆံပငျမရိတျဖို့ ဆရာဝနျမြားက ဆိုပါတယျ။
၄။ ကလေးကို တတျနိုငျသမြှ အမွနျဆုံး အိမျသာသုံးတတျဖို့ သငျပေးတာ
သငျ့ရဲ့ကလေးသေးသေးလေးကို အခုအိမျသာ မသုံးစခေငျြသေးဘူးဆိုရငျ မစိုးရိမျပါနဲ့။ ကြှနျတျောတို့အားလုံးက မတူညီကွသလိုပဲ ကလေးတှအေားလုံးက သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျအရှိနျအဟုနျမှာ ဖှံ့ဖွိုးကွတာကွောငျ့ သငျ့ကလေးက အဆငျသငျ့မဖွဈသေးရငျ သူတို့ကို ဖိအားမပေးပါနဲ့။ တခြို့ကလေးတှကေ ၁နှဈမှာ အိမျသာအိုး potty စသုံးကွပွီး တခြို့က ၂နှဈမှာ စသုံးတာကွောငျ့ မတူကွပါဘူး။
၅။ အပူလောငျရငျ ထောပတျနဲ့ ကုသတာ
ဒါက တကယျ့အဖွဈမြားတဲ့ အယူအဆမှားတဈခုပါ။ ဘာ့ကွောငျ့ ဒါကို ယုံကွညျကွတာလဲ?
အပူလောငျတဲ့အခါ ဒဏျရာပျေါကို ထောပတျလိမျးတာက ဒဏျရာကို ပိုဆိုးသှားစပေါတယျ ။အရပွေား ဒဏျရာကိုကုသဖို့ ထောပတျလိမျးတာကို ဆေးဖကျဆိုငျရာက ခှငျ့မပွုထားပါဘူး။ ထိုသို့ပွုလုပျလြှငျ အရပွေားကို ပကျြစီးစနေိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အပူလောငျတဲ့အရပွေားကို ရအေေးအောကျမှာ ထားပါ (ရခေဲလို အရမျးအေးလှနျးတာ မဖွဈရပါဘူး)
အပူလောငျဒဏျရာအတှကျ ointment (ဆီမှေး)လိမျးပေးပါ။
ပွီးနောကျ ဆရာဝနျဆီကိုသှားပွဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
၆။ ကလေးက ဘယျသနျဆိုရငျ ပွနျပွီးလကေ့ငျြ့ပေးတာ
အရငျတုနျးက မိသားစုတှဟော သူတို့ကလေးကို ဘယျဘကျလကျနဲ့ စာရေးတာတို့ပွုလုပျခဲ့ရငျ မြားသောအားဖွငျ့ ညာဘကျလကျနဲ့ ရေးတတျအောငျ ပွနျပွီး သငျပေးတတျကွပါတယျ။ ဒါက တကယျလိုအပျတာလား?
ကလေးတဈယောကျဟာ လူ့လောကထဲရောကျလာတဲ့အခါ သူတို့မှာ dominant hand ဆိုတာ ရှိပွီးသားပါ။ ကြှနျတျောတို့က သဘာဝကို ဆနျ့ကငျြဖို့ ကွိုးစားတဲ့အခါ ကြှနျုပျတို့ negative အကြိုးဆကျတှကေို ရငျဆိုငျရပါလိမျ့မယျ။ ကလေးတဈယောကျရဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှုနှငျ့ သငျယူနိုငျစှမျးကို လြှော့ကစြနေိုငျပါတယျ။ ကလေးရဲ့ သဘာဝ tendency( ယိမျးယိုငျမှု)နှငျ့ သှားဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။
Previous articleဘာစားစား၊ ဘာလုပ်လုပ် လေတိုက်တိုင်း ဝနေတဲ့သူတွေ ဝိတ်မတက်အောင် ထိန်းသိမ်းနည်း
Next articleပျိုမေတွေအတွက် စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ရင်သားအစုံကို ပိုင်ဆိုင်စေမဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း